Mark Ronson wuxuu ka hadlayaa farxadaha iyo dhibaatooyinka abuurista taxanaha 'Daaw codka' ee Apple TV + | Waxaan ka socdaa mac
Markii bishii Abriil ee la soo dhaafay Apple ay ku dhawaaqday barnaamijka Bal daawo saaxirad Mark Ronson Iyadoo loo marayo trailer, shirkadda ku saleysan Cupertino ayaa sheegatay in taxanaha dokumenteriga ah waxay ku saabsan tahay tikniyoolajiyadda muusigga.
Si kastaba ha noqotee, sida uu sheegayo soo-jeediyaha, silsiladan waxay ku saabsan tahay wax walba marka laga reebo tikniyoolajiyadda iyadoo diiradda la saarayo noocyadan qalab ee ka dhashay horumarka tikniyoolajiyadda ayaa dhiirrigeliyay fannaaniinta waxayna beddeleen muusig. Ronson wuxuu ku yiri wareysi uu siiyay Variety in Apple ay raadineysay wax farsamo iyo geeso ah oo kuwa jecel muusikada ay sidoo kale jeclaan lahaayeen.
Sida Ronson sheegay:
Waxay ila soo xiriireen Morgan Neville… waana jeclahay shaqadiisa. Isagu waa taageere weyn oo muusig ah. Mark Monroe wuxuu saarnaa diyaaradda si uu wax u soo saaro, xitaa ma aanan ogeyn inta waxyaalood ee uu masuulka ka ahaa, sida 'The Bee Gees': Sideed U Beddelaysaa Qalbi Jaban. '
Waxaan dhamaanteen bilawnay inaan ka fikirno waxa taxanahan noqon doono waana markii aan go'aansanay inaan u kala qaadno lixda teknoolojiyad ee aan aaminsanahay inay ugu muhiimsan yihiin kacaan ka qaadista miyuusigga casriga ah, mas'uulna ka noqonno codadka iyo heesaha ay qeyb ka yihiin nolosheena.
Taxanaha wuxuu ku bilaabmayaa autotune, tiknoolajiyadda lagu muransan yahay taas hagaaji dhibaatooyinka codka oo waxay ka dhigeysaa fannaaniinta inay ka dhawaajiyaan sidii ay ahaayeen. Ku saabsan tikniyoolajiyaddan, Ronson wuxuu sheegayaa:
Markii uu Kanye West la soo baxay '808s & Qalbi jab' 2008, waxay badashay aragtidayda xoogaa sababtoo ah Kanye waligiis iskama dhigin inuu yahay heesaa, laakiin wuxuu helay qalabkan, gawaarida, taas oo u saamaxday inuu la soo baxo heesahan cajiibka ah ee waxay ahaayeen madaxiisa iyo tan kale haddii kale ma aanan sameyn karin.
Qeybaha kale waxay ka hadlayaan mowduuca si isku mid ah loogu muransan yahay ee muunad qaadistaMarka lagu daro adeegsiga tiknoolajiyada oo aan muuqan, sida habka Beatles ay kor ugu qaadday codka ama Wiilasha Beastie ay si ula kac ah u soo bandhigeen dhalanrog.
Ronson wuxuu sheeganayaa in taxanaha sidoo kale Bixiyaan abaalgudka hormoodka sida Delia Derbyshireoo muusiggiisa elektarooniga ah laga soo bilaabo 60-kii - oo ay ku jirto heesta "Dhakhtarka Yaa" - uu helayo aqoonsi ay mudantahay muddooyinkan dambe.
Ku daawo Codka Mark Ronson waa taxane lix-qaybood ka bilaabmaya hawada Jimcaha, Julaay 30.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Noticias » Calaamadee Ronson farxadaha iyo dhibaatooyinka abuurista taxanaha '' Daaw codka 'ee Apple TV +